CIIDAMADA XOOGA DALKA OO LA SOONOQDAY HAYBADOODII 27 SANADOOD KADIB,SOONA BANDHIGAY CADAWGA QARANKA SOOMAALIYEED - Latest News Updates
CIIDAMADA XOOGA DALKA OO LA SOONOQDAY HAYBADOODII 27 SANADOOD KADIB,SOONA BANDHIGAY CADAWGA QARANKA SOOMAALIYEED
Dalka soomaaliya, waa dal ku yaal meel wanaagsan lehna khayraad dabiici ah waana dal hodan ah kolka dadkiisu ka shaqeeyaan.Waxaa ka dhacay dalka burbur dawladeed iyo dagaalo sokeeye.hasayeeshee waxaa nasiib daro ahayd in dadka soomaaliyeed xakamayn waayeen fawdada iyo dagaalada macna la aanta ah mudo aad u dheer.
Iskudayo farabadan oo lasameeyay ma noqon mig guulaysta oo taaba gala.hadaba intii aynu dawlad la aanta ahayn,waxaa dalkeena baylahda ah ka faa iidaysta cadaw shisheeye,oo inagu dhex samaystay,siyaasiyiin,iyo ganaacsato iyo ciidan kuwanoo ah kuwo u adeega gumaysiga danihiisa guracan. Waxayna iyagu ku macaashaan oo faa iido ku qabaan dalkeena oo ahaada meel aysan ka jirin nidaam iyo kala danbayn iyo isla xisaabtan ah dawladnimo.
In alaale iyo inta dalkeenu qasan yahay,oo uusan lahayn dawlad iyo ciidan dalka hanta iyaga waa siday doonayaan oo ku macaashaan. Nasiib wanaag dadaalo farabadan oo dadka soomaaliyeed soo sameeyeeni waxa uu dhalay in ay doortaan rag xilkas ah oo leh garasho fog iyo hogaamin, ah mutacalimiin karti badan, ah wadaniyiin ay ka go an tahay in dalkooda ay samata bixiyaan kana saaraan fawdada iyo dawlad la aanta nus qarniga haysata.
Taariikhdu markay ahayd 8.02.2017 ayaa umada soomaaliyeed si miyir qab iyo xulasho rasmi ah ay uugu doorteen ninkii dalkaan samatabixin lahaa,iyagoo ku saleeyay xulashadooda daacadnimada,hogaaminta,wadaniyada,iyo sinaanta umada soomaaliyeed nin sifahaas leh,kaasoo noqday Mudane madaxweyne Farmaajo. uugu horaynba waxuu noo balan qaaday in uu keenayo Raysal wasaare leh karti aqoon iyo wadaniyad,wuu ka dhabeeyay balan kiisii waana uu inoo keenay raysal wasaare marka laga hadlayo taariikhda afrika oo dhan iska daa soomaaliya ee aan isagoo kale lagu arag,kartidiisa iyo wadaniyadiisa Xafidullaahu mudane khayre. qofkasotoo soomaali ah oo meel iska dhiga qabiil iyo xasad iyo xiqdi wuu arkaa haybada khayre iyo shaqadiisa hufan wuuna ku faanayaa.
Dawladu waxay boorka ka jaftay ladagaalanka musuqmaasuqa,durba waxay soo celisay in shaqaalaha dawlada uu helo mushahar joogta ah,in canshuur la qaado dhaqaalo aynu yeelano waana markii koobaad nus qarni ku dhawaad. dawladu waxay dhistay ciidankii xooga dalka soomaaliyeed,waxayna siisaa mushahar joogta ah oo ka fiican qaabka ay kenya iyo ethiopia ciidamadooda u mushahar siiyaan dhanka dhaqaalaha iyo tayadaba.maanta qofkastoo soomaaliyeed oo wadani ahi waxa uu dareemayaa faraxad hormarka dalkiisa iyo madaxda wanaagsan ee illaahay inoo kiciyay ee dalkeena dhisaya.
SIRTA CIIDANKEENU FASHILAY EE SOO BAXDAY!!
Markaab waa ciidankii oo ah afduub.
Markii ciidankii xooga dalka soomaaliyeed,dib u habayn lagu sameeyay ee laxareeyay,waxaa u bilawday tababar iyo fasal la fariisanaayo oo duruus la qaadanaayo ciidan ahaan. waana siday waligeedba ahaan jirtay in ciidanku waxbarto cilmi ciidan iyo mid maadi ah laama cilmiga ee kala duwan.waxaa labaray wadaniyada iyo dawladnimada iyo difaaca dadka iyo dalka siday ahaan jirtay ama dawladnimaduba ay tahay. hadaba maxaa dhacay weeye?
Waxaa la arkay ciidamo soo doonta uun mushaharka,waxaa la arkay kuwo aan ku naagaanaynin xeryaha iyo goobaha loogu talagalay, waxaa la arkay kuwo goobihii dagaal dib uuga soo baxay! waxaa intaa dheer ciidamo qaab beeleed u abaabulan oo gashan tuutihii xooga dalka soomaaliyeed,oo sheeganaya ciidan qaran,kuwaas oo iska diiday kolkii dawladu ay uugu yeertay in ay xeryaha iska soo xaadiriyaan oo is diiwaan galiyaan. waxaa la arkay odayaal beeshooda ah iyo dad shacab ah oo ay ku yiraahdeen beesheenaa dawladu diidantahay in ay ciidan qorto, si ay shacabka iyo dawlada isaga horkeenaan. waxaa hada cadaatay oo dadkii soomaaliyeed si toosa u fahmeen markay ka horyimaadeen oo diideen in ay xero galaan noqdaan ciidan qaran sideedaba.
Waa hore ayaa beelaha qaar oran jireen maleeshiyo beelood yadooda,sidooda halagu qaato oo ciidanka haku biireen dawladu waa soo dhawaysay waxayna kala noqdeen wax kubiiray ciidanka iyo kuwo isaga tagay oo kacabsaday in ay shabaab ka hortagaan.
CIIDANKA TUUTAHA WATA OO AAN AHAYN CIIDANKII XOOGA DALKA SOOMAALIYEED DIIDAY DIIWAN GALIN YAA DHISTAY?
Ciidankan waa mid abuurmay kadib burburkii dalkeena,kolba heer bay soomarayeen,kuwa hada waxaa dhisay TIGREEGII iyo dawlado carbeed.waxay ka amar qaataan wakiiladooda oo ah sadex kooxood oo isku xiran wada shaqaysta oo kala ah.
1.Hogaamiyayaasha afduubka diinta kugabada ee gumaada shacabka
2.Ganaacsatada gaar ahaan kuwa suuqa bakaaraha
3.Kuwa ku gabada mucaaradka iyo siyaasada waayadan danbana loogu yeero SIYAASIYIINTA XANAAQSAN.
Sadexdan oo gudaha joogaa waxay wakiil u yihiin oo fangareeya dawladahaa shisheeye ee aan korku xusnay,una badan dalalka khaliijka. Hadafkooduna waa soomaaliya in aysan marnaba helin nidaam iyo kala danbayn iyo dawladnimo sidan ayay u arkeen maslaxadooda siyaaso.
Ciidamadan waa kuwa loogu tago shabeelada hoose dadka mogdisho u xukun tagaan.bakaarahaa dadka laga kaxeeyaa afkaa loo duubtaa marna tuutaa loo gashaday oo ciidan qaran laysaga dhigay taasoo marag ay uuga dhigteen madaxweyne xasan sheekh iyo xulufadiisii oo ku magacaaba kooxdan ciidan qaran waaye! waxaa xusid mudan in hada kahor ay dadka dagaanka shabeele ka dacwoodeen ciidankan marana ah beesha marana ah shabaabka marna uu xasan sheekh leeyahay waa ciidan qaran! soomaali waa wada ogtahay arinkaa uu xasan ku gabood falay shabeelada hoose.
CIIDANKII XOOGA DALKA SOOMAALIYEED waxay arkeen ciidamo dalka ka jira oo aan ahayn ciidan qaran soomaaliyeed oo ka amar qaata dalal shisheeye iya goo isugu xiran siyaasiyiin meel ah iyo ganaacsato meel ah iyo shabaab meel ah intan oo hal meel laga xukumo lehna wada shaqan buuxda. Arimahan daba galkooda iyo fashilintoodaba waxaa keenay oo daba taagan ciidanka qaranka xooga soomaaliyeed oo wacad kumaray in xididada ay u siibayaan kuwa cadawga u adeegaya ee inagu dhex jira.
Ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maha qabiil iyo gobol waa soomaali waana qaran iyo dawlad,cadawbaynu leenahay gudaha ah oo bixinaya sirta dalkeena oo abuuraya amaan daro dalkeena kanoo kaxun shisheye dibada.waa u hanbalyaynaynaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed in ay difaacaan dalkeena iyo dadkeena soomaaliyeed.
Soomaaliya way ka gudubtay xiligii qabyaalad lagu awrkacsanaayay, tuug danayste ah oo dalkiisa iibsanaaya xiligiisii waa dhamaaday,haday aabahaa iyo hooyadaa dhaleen oo uu soomaali udiidanyahay dawladnimo qabo cadwga. dadka soomaaliyeed dawladnimay rabaan nabad iyo nolol horaana loo soconayaa, midna ku bisharaysta sifaysna waa soo dhawyahay lasifaynayo kuwa inagu dhexjira.
Sida dalkastaa oo dawlad ahi ku dhaqmaan,waxaa reeban ciidan abaabulan oo aan diiwan gashanayn hubaysan si sharci daro ah in uu jiro.Ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wuxuu ka digay in rag si been abuur ah u gashaday dirayska astaanta u ah una gaarka ah ciidanka xooga dalka soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan ay shacabka soomaaliyeed ku dilaan kuna dhacaan,si loo kala fogeeyo kalsoonida shacabka iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed,sidaa daraadeed cidii lagu argo huga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaa loo aqoonsaday in ay tahay mid khatar ku ah amaanka iyo xasiloonida dalka soomaaliyeed.shacabka wadaniyiinta ah ee soomaaliyeed waa ku mahad sanyihiin garab istaaga iyo taageerida iyo dhaqaalaynta ciidanka dalkeena hooyo ee geesiyada ah oo u istaagay sugida amaanka dalkeena. shacabka iyo ciidanka soomaaliyeed cidka adkaan kartaa majirto waana isku duuban yihiin markaan.